Ivo vanokumbira Apple kuti idzose Pamplona kuMamepu avo pachinzvimbo cheIruña | IPhone nhau
Ivo vanokumbira Apple kuti vadzosere Pamplona kuMamepu avo pachinzvimbo cheIruña
Munguva pfupi yapfuura Apple yakafunga kushandura zita rePamplona kuenda kuIruña mune yayo Mamepu uye Mamiriro ekunze, sarudzo isina kugutsa vazhinji Navarrese, izvo zvakakonzera chikumbiro kuvhurwa muCitizen. Enda kuApple kuti udzokere kusangano rapfuura uye Pamplona kuti udzokere pakuva Pamplona mune yeApple, iPad uye Mac mafomu.
Kutaura izvozvo ChiSpanish ndiyo chete mutauro wepamutemo mu100% yenharaunda yeNavarre, uye vazhinji veNavarrese havazive Basque, mutauro unobva Iruña unobva, pamwe nekugona simba rezvematongerwo enyika iro rinogona kunge rakabatsira kuchisarudzo chaApple, mumaawa asingasviki makumi maviri nemana. chikumbiro ichi Yakawana masigineti anodarika chiuru uye iri kuenda nehutachiona painternet.
Pamplona kana Iruña, ese mazita ari pamutemo kuziva guta guru reNavarra. Pamplona muSpanish, Iruña muBasque, zviri pamutemo maererano neProvince Chirevo cha2009 chakaburitswa neHurumende yeNavarra. Asi Vashoma vanhu vanobva kuNavarra vanoshandisa chiBasque semutauro wavo wenguva dzose, vasingasvike gumi muzana maererano nechikumbiro chiri kukumbira kuti Spanish ishandiswe zvakare kutumidza guta guru Navarra:
Ndinokumbira kuti, mumamiriro ekunze eApple (meteorological) ePhones, iMacs uye iPads, PAMPLONA, iro zita repamutemo reNavarran capital, rinowoneka zvakare, iro rakatsiviwa -rezvino- ne IRUÑA, zita rayo muBasque. […]
ChiSpanish ndiyo chete mutauro wepamutemo munzvimbo yese yeNavarrese. Ivo vanozvitaura 100%. Euscaro (Euskera) kana Batúa, vanozvitaura nenzira yakajairika isingasviki gumi muzana. […]
Muchidimbu, ndinokubvunza, kana kuti, ndinokumbira kuti nzvimbo ine maApplication anoshandisa GPS anowirirana neiri pamutemo uye repamutemo zita rePAMPLONA. Izvi zvinokanganisa huwandu hwakawanda hweNavarrese uye zvinogona kuumba nyonganiso uye kukanganisa kushanya. Uye inogona kuve nemhedzisiro yakakomba uye yezvemari mhedzisiro.
Kana iwe uchida kuverenga iyo yakazara chikumbiro, inowanikwa pa Iyi link, uye panguva yekunyora chinyorwa ichi yakatounganidza masiginecha anopfuura chiuru chimwe nemazana maviri, maawa asingasviki makumi maviri nemana apfuura rakabudiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Ivo vanokumbira Apple kuti vadzosere Pamplona kuMamepu avo pachinzvimbo cheIruña
Handifunge kuti zvakaipa kuona mutauro wekare muEurope
Oo zvangu, chii chinonzi mania icho chitarisiko cheEuskera chine ... INCREDIBLE !!
CHII CHINONZI VOX? akadaro
Iwo maBasque aigona kukumbira kuisa DONOSTIA, BILBO, GAZTEIZ ...
Pindura CHII CHINONZI VOX?
IRUÑA / PAMPLONA akadaro
Iyo muzana ndeye manyepo, hafu yeNavarr @ s vanonzwisisa Basque. Uye muIRUÑA mapato eSpain haatonge, maBasque anotonga… ndingati chinhu chakanakisa kuisa mazita maviri epamutemo, asi kukumbira kuti Iruña ibviswe ruvengo rwemutauro… zvakakomba mumaonero angu.
Pindura IRUÑA / PAMPLONA
Uye kubvunza kuti vabvise Pamplona hakusi kuvenga mutauro?
Pindura kuna Salinator
Zvakaoma sei kuremekedza mitauro mishoma? Saka zvakaoma here kufara kuti mutauro wekare hautsakatika? Yakanyanya kutsamwa inokupa iwe kuti Spanish haisi yakasarudzika, kuve hegemonic sezvazviri? Zvinodhura zvakadii kuremekedza dzimwe tsika dzepeninsula?
Maitiro ekunyorera katsamba kubva ku lock screen ye iPhone yedu kana iPad